Conveyor mitondra Roller, Conveyor Frame, Head Pulley - TongXiang
MANOME ISIKA HIGH QUALITYPRODUCT
TX Roller maneho ny faran'izay tsara maotera pulley hanampy ny mpanjifa amin'ny fanampiana hahatonga ny fototra / ahy / toerana ho tonga kokoa, azo antoka sy mamokatra. Modification & Accessories: Custom shafting tamin'ny 45 # na 55 # vy. HE, XT, Taper-Lock na famatrarana QD hubs. Complete fiangonana misy amin'ny pulley, bushings, shafting sy bearings. SBR, Neoprene na D-haingana toy vulcanized lagging avy 6.35mm hatevin'ny hatramin'ny 25,4 matevina na 25mm matevina lagging tanimanga. Conveyor Pulley Type: Head ...
TX Roller maneho ny faran'izay tsara HDPE-roller hanampy ny mpanjifa amin'ny fanampiana hahatonga ny fototra / ahy / toerana ho tonga kokoa, azo antoka sy mamokatra. HDPE Roller Mahatsara azy: * Non manimba tsikelikely, tsara abrasion fanoherana; * Maivana noho ny vy-roller, lava mahatratra; * Dia azo ampiasaina amin'ny efa misy fangatahana izay rollers vy no ampiasaina; * Lower manomboka amin'ny vola lany-up fitaterana noho ny maivana aelin'ny hita lanja * Recyclable, angovo mahomby, mihena hovitrovitra; * Fikojakojana mampihena ny fankamamiantsika ny vola lany ...
TX Roller maneho ny faran'izay tsara vy-roller hanampy ny mpanjifa amin'ny fanampiana hahatonga ny fototra / ahy / toerana ho tonga kokoa, azo antoka sy mamokatra. Tongxiang dia iray amin'ireo malaza indrindra conveyor-roller mpanamboatra in China.We manana traikefa 38 taona any production.We no manokana famokarana fitaovana sy ny milina mizaha toetra ny antoka ho an'ny mandroso ny teknolojia sy ny kalitao avo. Steel Roller Mahatsara azy: fifaninanana vidiny; Labyrinth telo tombo-kase; Custom vovoka mifono. Se ...
Hebei TongXiang Conveyor milina Co., Ltd , naorina tamin'ny 1980, ka manokana amin'ny conveyor fitaovana sy ny Accessories. Am-polo taona ny traikefa efa nanome antsika ny fomba hentitra ny fanaraha-maso ny kalitao. Mihoatra ny 80 isan-jato mpiasa no miasa eo amin'ny orinasa nandritra ny 5 taona. Nanomboka tamin'ny 2004, Mr.Cui hanitatra ny fitoriana ny ampahany ara-nofo fikirakirana ary manao ny orinasa maniry indray. Indrindra mpanamboatra Conveyor Roller & kamo, Conveyor Frame & Station, Pulley, Fiantraikan'ny Bar / Bed sy ny singa hafa, toy ny fingotra Ring, Tube, Shaft, mitondra seza sy Seal.
Hebei TongXiang Conveyor milina Co., Ltd
Latest Avy & Blog News
Fehin-kibo Conveyor kamo Roller For Sale
Tongxiang dia conveyor Accessories mpanamboatra in China.We famatsiana avo lenta fehikibo conveyor kamo-roller amidy. Fehin-kibo conveyor kamo-roller ho toy ny ampahany lehibe indrindra amin'ny conveyor fitaovana, ny tena tanjona dia ny handroaka ny-roller tena, mitondra trano, nitondra ivelany peratra sy ny famehezana ny peratra hanodinana ny ...
Cone Roller Manufacturer Shina
Tongxiang dia matihanina cone-roller mpanamboatra ny famokarana China.Today orinasa ankapobeny misafidy ny hampiasa fitaovana conveyor ho an'ny asa famokarana. Conveyor Accessories azo miorina amin'ny zavatra ilain'ny orinasa automatique fitaovana famokarana sy ny samy hafa sy ny fitaovana ilain'ny Tr ...
Fitaovana Conveyor Manufacturer In Shina
Tongxiang dia conveyor mpanamboatra fitaovana ao Shina, no ahafantaranao izay lafin-javatra tokony hodinihina rehefa fitaovana fampitana dia nofantenana? Mba hiantohana ny azo itokisana ny conveyor fiasan'ny fitaovana, dia ilaintsika ny mandinika ireto lafiny roa amin'ny fifidianana ny fitaovana fampitana: t ...
High Quality Belt Conveyor kamo Roller
Tongxiang dia matihanina conveyor Accessories mpanamboatra Shina, izahay, ka mamoaka avo lenta fehikibo conveyor kamo-roller in China.Vertical fanadihadiana ny fitaovana fitaterana Shina orinasa, ny ankamaroan'ny orinasa manana mari-pahaizana sasany ny fanilikilihana fironana, ilay antsoina hoe rafitra fanohanana tokana. Amin'ny ...
Belt fingotra Conveyor Components Manufacturers In Shina
Conveyor singa izahay orinasa ao Shina, ankehitriny isika dia hampiditra ny fingotra fehikibo conveyor singa ho anao. Fehin-kibo Conveyor dia iray amin'ireo fitaovana fitaterana lehibe ao amin'ny orinasa mpitrandraka arintany. Izany no tena ampiasaina ho an'ny lalana ao amin'ny faritra fitrandrahana, lalana amin'ny lafiny mandroboka ny latsaky ny 10 * ...